Ɛnam sԑ yԑn nnwumapa ada yԑn adi sԑ yԑyԑ (ↄkasa) nkyerԑaseԑ adwumakuo nti, SunFlare gyina hↄ sԑ ↄyↄnkoↄ a ↄma n’adwadifoↄ nimdeԑ mapa a Wobԑtumi de wo ho ato so.
Yԑdi dwuma a ahodoↄ a emu dↄ, a yԑnam nkrataasԑm ho Wobԑtumi de ahodoↄ a nnwumakuo a wↄdi dwuma ahodoↄ hia so na ԑdie.
Yԑtumi ma wↄn a yԑdi dwuma ma wↄn no nsa ka anoyie mapa berԑ a yԑbԑda nkrataasԑm ho haw adi na yԑadi ho dwuma ntԑm so wↄ pԑpԑԑpԑyԑ kwan so.
Adwumakuo Ho Asԑm
Ͻsanaa 1, 1971
Tokyo Ͻfese Baatan:
Ͻkwankyerԑfoↄ A Ͻsi Yԑn Anan Mu
Atwerԑ (mfidisԑm ne apomuden nsԑm)
Bↄsrԑmuka dwumadie (disaen, DTP, wԑb ne video)
Nkrataasԑm ho akwankyerԑ
Nhwehwԑmu (mmara, nhyehyԑeԑ, susudua ne ↄdedeԑ)
Atwerԑtwerԑ ne adesrԑ ho mmoa (ↄdedeԑ, nhyehyԑeԑ ho nsԑm ne apomuden nsԑm)
Nwomasua ne nteteeԑ
Translator Qualifying Examination (TQE) (Nkyerԑaseԑni Abodin Sↄhwԑ)
Sԑmina ahodoↄ (ↄdedeԑ ne apomuden mfidie)
Type II Marketing Authorization Holder License for Medical Devices (Adetↄn Ho Tumi Krataa a Ɛfa Apomuden Mfidie Ho)
Tumi krataa wↄ ISO 27001 ne ISO 9001
Wↄn a yԑyԑ wↄn nnwuma no wↄ nkrataasԑm ho ahiadeԑ ahodoↄ ahodoↄ. Sԑdeԑ ԑbԑyԑ a yԑbԑtumi anya bammↄ nhyehyԑeԑ mapa a yԑnam so bԑgye wↄn nsԑm a ԑyԑ kokoamusԑm na yԑwie a yԑbԑtumi de adwuma a ԑdi mu pa ara ama wↄn nti, yԑdi amansan ntotoeԑ ho nhyehyԑeԑ ahodoↄ so.
Yԑwↄ suahunu wↄ adwuma ahodoↄ ahodoↄ ne nnwumakuo ahodoↄ ahodoↄ dwumadie mu
Sԑdeԑ ԑbԑyԑ a yԑbԑtumi akↄ so ayԑ ↄyↄnkoↄ a wobԑtumi de wo ho ato yԑn so nti, abenfoↄ a wↄwↄ adwuma yi mu ne akuo a wↄdi dwuma ankasa no yԑ adwuma bom ma wↄn a yԑyԑ wↄn adwuma no nsa ka anoyie a edi mu wↄ ↄhaw a ԑsi wↄn ani so ho.
Yԑwↄ nimdeԑ korogyee wↄ ↄkasa 70 mu
Sԑ adwumakuo bi pԑ sԑ ↄno ara trԑ ne ntaban mu kↄ wiase afaanan nyinaa a, ԑwↄ sԑ ↄtumi hunu sԑdeԑ aman a ↄpԑ sԑ ↄkↄ so no nyinaa kasa ne wↄn amammerԑ teԑ. Wotumi hunu sԑ ԑnyԑ adeԑ a yei bԑyԑ yie wↄ adwumasԑm mu. Mmom, woba SunFlare a, yԑwↄ abenfoↄ wↄ ↄkasa bԑyԑ 70 mu a wↄsan nim amammerԑ a ԑwↄ baabi a yԑde saa ↄkasa ahodoↄ yi di dwuma no. Wↄbԑtumi ama wↄn a yԑyԑ wↄn adwuma no nsa aka mmoa a wↄhia wↄ wↄn adwumayԑ mu a ԑbԑma wↄn adi nkunim wↄ amansan adwumayԑ mu, wↄ berԑpa mu nso. Yԑn abenfoↄ no wↄ nimdeԑ a emu dↄ yie wↄ dwumadie pↄtee biara ho, a wↄwↄ ↄkasa ho nimdeԑ tatahwe nso a wↄde pia no, a ԑboa yԑn ma yԑtumi di dwuma a ԑho twa, ntԑm so, wↄ nkrataa a ԑhia nimdeԑ mapa bi te sԑ, mmara mu nkrataasԑm, nwomasua nkrataa ne nhyehyԑeԑ ho adesrԑ nsԑm ho.